बिपत्तिमा ‘मनकारी’हरुको घोषणा – Pahilo Page
खाद्ययान्न सहयोग देखि घर भाडा नलिने सम्मको घोषणा
१२ चैत्र २०७६, बुधबार ०९:४५ 1200 पटक हेरिएको
तुलसीपुर, १२ चैत ।
कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण फैलिएसंगै उत्पन्न विपत्तिका बेला विभिन्न मनकारीहरुले सहयोगको घोषणा गरेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण व्यापार व्यवसाय लगायत दैनिक ज्याला मजदुरी समेत बन्द हुँदा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न केही मनकारीहरुले सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का सदस्य दुजमान भण्डारी (बर्षात) ले आफ्नो वडाका विपन्न नागरिकलाई सहयोगको घोषणा गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर मात्र खान पुग्ने र खाद्ययान्नको अभाव भइ समस्यामा रहेकालाई आफू सहयोग गर्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन् । उनले यस्तो समस्यामा रहेकालाई आफ्नो मोवाइल नं.९८५१२४४३०५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् ।
भण्डारीले समस्यामा रहेकालाई नगद सहयोग भने नगर्ने बताएका छन् । ‘नगद सहयोग गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ, त्यसकारण पनि जिन्सी सहयोग गर्ने छुँ’ । यसअभिपनि विभिन्न सामाजिक कार्य गर्दै आएका वडा सदस्य भण्डारीले बताए । यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले पनि वडा नं. ७ मा कोही समस्यामा रहे आफूलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले पनि फेसबुक मार्फत समस्यामा परेकालाई आफ्नो मोवाइल नं. ९८५७८२५८६३ र यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्तीमा कार्यरत रमेस रेग्मीको ९८५७८२५३२३ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै लकडाउनको समयमा व्यापार व्यवसाय बन्द रहेकाले व्यवसायीलाई घरभाडा तिर्न समस्या हुने भन्दै दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसालले आफ्नो घरका ६ वडा सटरको भाडा नलिने घोषणा गरेका छन् । भुसालले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सटर भाडा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
यस्तै तुलसीपुर ६ हात्तिखौवाका पदम बहादुर खत्रीले पनि आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरुसँग भाडा नलिने घोषणा गरका छन् । यस्तै संविधान सभा सदस्य अनारकली मियाँले पनि आफ्नो घरमा भाडामा बस्नेहरुसँग भाडा नलिने घोषणा गरेकी छन् । तुलसीपुर ५ निवासी मियाँले फेसबुक मार्फत सो घोषणा गरेकी हुन् ।
कोभिन १९ का कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा घरभाडा, बैङ्क ब्याज, किस्ता, कर्मचारीहहरुको तलव कसरी तिर्ने भन्ने पिरलोमा रहेका व्यवसायी र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर मात्र खान पुग्ने नागरिकको पिरलो यी मनकारीहरुको घोषणाले मात्र मेटिने देखिदैन । व्यवसायीहरु एक देखि ६ महिना सम्मको बैङ्क ब्याज छुट गर्न राज्यलाई आग्रह गर्दै आइरहेका छन् ।